Soomaali - Washington Youth Development Nonprofit Relief Fund
Deeqda Lacagta Samofalka Hormarka Dhalinyarta Washington
Waaxda Ganacsiga Gobolka Washington oo ay weheliso School’s Out Washington ayaa hirgeliya Deeqda Lacagta Samofalka Hormarka Dhalinyarta Washington. Tani waxaa weeye maalgelin hal mar waxaana lagu bixin doonaa 9.3 milyan oo aan xadidinayn lacag ah oo barnaamijyada hormarka dhalinyarta ah kuwaas oo ka shaqeeya taageerada dadka dhalinyarta ah ee uu saameeyay safmarka COVID-19 ee kana fog cadaalada waxbarashada.
Nuqulka turjuban ee RFP waxaa lagala degi karaa halkan. Fadlan ogsoonaw in dhamaan arjiyada ay tahay in lagu soo gudbiyo Ingiriisi oo laguna soo gudbiyonidaamka arjiyada online-ka ah. Waxa aad isticmaali kartaa nuqulka turjuban ee RFP si aad u naqdido macluumaadka shuruudaha u qalanka, nidaamka naqdinta, iyo nidaamka arjiga.
Soo Dejiso nuqulka Soomaali ee RFP
Macluumaad muhiim ah:
Arjigu waxa uu ku eeg yahay Oktoober 6, 2020.
Xadiga deeqda lacagtu waxay u dhaxaysaa $10,000 ilaa $50,000.
Waxa aanu filanaynaa in aanu wargelino cida heshey Noofember, iyo in aanu bixino lacagta Diseember 2020.
Dadka dalbanayaa waa inay noqdaan 501 (c)(3) Hay’ada samo fal ama xisaabta maalgeliayha ee 501 (c)(3)
Dalbadayaashu waa inay bixiyaan adeegyada hormarka dhalinyarta oo ay siiyaan caruurta iyo dhalinyarta da’doodu u dhaxayso 5-24 wixii ka horeeyay COVID-19.
Dalbayaashu waxay wakhti bixiyaan ama u qorshaysan inay bixiyaan adeegyada oo ay ku siiyaan dhalinyarta foolka-fool, maqal iyo muuqaal, ama taageerada baahida ee tooska ah inta u dhaxaysa Maarso iyo Diseember 2020.
Dalbadayaashu waa inay ku dhacdo saamayn dhaqaale oo ka timid COVID-19.
Waxa aanu la shaqaynaynaa bixiyayaal kaalmada farsamo si aanu u bixino kaalmada qoraalka kaalmada ee lasiiyo dalbadayaasha, gaar ahaan dadka u baahan taageerada oo luuqado kala duwan ah. Waxa aad ka eegi kartaa liiska dhan ee kaalmada farsamada halkan.